Twitch waxay soo saartaa muuqaalka SharePlay ee muddada dheer la sugayay ee iOS | IPhone news
Twitch waxay soo saartaa muuqaalka SharePlay ee muddada dheer la sugayay ee iOS
Alex vincent | 01/12/2021 18:00 | Barnaamijyada IPhone, macruufka 15
Iyadoo imaatinka iOS 15, shaqeynta ee SharePlay waxay timid FaceTime, halkaas oo isticmaalayaashu ay fursad u heli karaan inay daawadaan cutubyada taxanahayaga aan jecelnahay, filimada ama adeeg kasta oo baahinta ah oo la qabsanaya isla wakhtiga saaxiibka ama xubnaha qoyska. Hagaag, sida laga soo xigtay update ka Twitch, waxay mar horeba isku dari lahaayeen shaqadan, Awood u leh inaad wada aragto qulqulka inta lagu jiro wicitaannada FaceTime
Twitch waxay ku dartay taageerada hawlaha SharePlay ee madalkeeda iyo codsigeeda. Haddaba, U oggolow isticmaaleyaasha inay si wadajir ah u daawadaan fiidiyow kasta oo ku yaal goobta. Qulqulka aan ugu jecelnahay, muuqaal daahsan, baahinta dhacdada ciyaarta fiidyaha… wax kasta ha ahaatee.
Shalay Twitch wuxuu ku sameeyay isgaarsiinta rasmiga ah Twitter-ka. Xulashada sharePlay waxaa laga heli karaa aaladaha leh iOS 15.1 ama ka sareeya si la mid ah iPadOS 15.1. Sidaas maaha Apple TV, halkaas oo sifadan aan weli la heli karin.
Si loo bilaabo fadhiga SharePlay, isticmaalayaasha Waa inaan ku jirnaa wicitaanka FaceTime oo firfircoon oo aan ku rakibno dhammaan abka Twitch (ka sokow ahaansho diiwaangashan, Dabcan).
Marka aan bilowno kulanka sharePlay iyada oo loo marayo FaceTime, dhammaan ka qaybgalayaasha wicitaanku waxay ahaan doonaan la mid ah isla barta dib-u-ciyaarista fiidyaha. Intaa waxaa dheer, kontaroolada saameeya dib-u-ciyaarista fiidyaha (hakis, ciyaar, hore u socod ama muuqaal dib u dhac) sidoo kale waa la is waafajin doonaa.
Sidoo kale, war wanaagsan (oo si wanaagsan loo hirgeliyay) ee streamers-ka goobtan ayaa ah, Isticmaale kasta oo ku jira wicitaanku wuxuu u tirin doonaa daawade ahaan, Inaad awood u yeelatid inaad si dhab ah u koontaroolto booqdayaashaada iyo inaad awood u yeelatid inaad toosiso ama u falanqeyso shaqadaada si faahfaahsan.
Waxaan u maleyneynaa inay tahay fikrad wanaagsan Twitch inuu hirgeliyo shaqadan goor hore, isagoo sharadka ku jiidanaya soo jiidashada taageerayaal badan iyada oo loo marayo ereyga afka iyo fududaynta awood u yeelashada in ay ka faalloodaan asxaabta ama qoyska wax kasta oo dib-u-dhigis ah meel kasta iyo qaab isku mid ah. Sidan ku dhammaatay “ma aragtay durdurka...? Goorma…". Waxaan rajeyneynaa in wax yar ka yar codsiyada intiisa kale loo cusbooneysiin doono si la mid ah si loogu raaxaysto shaqeyntan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Twitch waxay soo saartaa muuqaalka SharePlay ee muddada dheer la sugayay ee iOS
Kani waa nooca AirPods qaar ka mid ah iyo dajiyeyaasha Apple oo leh kiis gebi ahaanba hufan
Apple Music ayaa daabacday liiska kuwa loogu dhageysiga badan yahay 2021